बीमाबारे सबैभन्दा पहिले सरकारले बुझ्नुपर्छ - samayapost.com
बीमाबारे सबैभन्दा पहिले सरकारले बुझ्नुपर्छ
समयपोष्ट २०७४ भदौ २९ गते ३:५३
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको अवस्था र लगानीको क्षेत्रबारे बताइदिनोस् न ?
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी वान अफ द स्ट्रङ कम्पनी हो । क्लेमको साथसाथै बिजनेस पावरफुल छ । मार्केटमा हाम्रो पोजिसन तेस्रो छ । हाम्रो क्लाइन्ट बेस एकदम राम्रो छ । हामीले दूरदराजसम्म आफ्नो पहुँच बढाएका छौँ । त्यसले गर्दा क्लेमको इस्यू पनि हाई छ । झण्डै हाम्रो ३ हजार क्लेम थियो, त्यसमध्ये अब करिव ४०–५ वटा मात्र बाँकी छ । हामीले १ अर्ब ५ करोड क्लेम तिरिसक्यौँ । अहिलेको इन्स्योरेन्स इण्डस्ट्रीमा हाम्रोजति क्लेम सेटलमेन्ट कसैको पनि छैन । रेगुलर क्लेम त २५ सय ३ हजार त भई नै राख्छ । तर भूकम्पबाट भएको क्षतिकोे ३ हजार क्लेम पनि हामीले सिङ्गल हेण्डल गर्यौं, जुन अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कसैले गरेको छैन । त्यसको बाबजुद हामीले त्यो वर्ष पनि २५ प्रतिशत सेयर होल्डरहरूलाई रिटर्न दियौँ र अर्को वर्ष पनि दियौँ २५ कै हाराहारीमा । अहिले पनि व्यालेन्ससिट राम्रै आउँछ ।
बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न भनेको छ, यहाँहरूले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
बीमा समितिले जुन प्लान दिएको छ, त्यो सबै कम्पनीहरूले प्रायः १–२ वटाले बाहेक सबैले पठाई सकेका छन् । सकेसम्म हामीले बोनस सेयर धेरै गर्ने विचार गरेका छौँ र केही नपुगलाई राइट सेयरमा जाने विचार गरेर प्लान बनाइसकेका छौँ ।
सरकारले बीमा कम्पनी थपेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
मार्केट यस्तो भएको छ कि अब पुँजी पर्याप्त छैन भन्न मिल्दैन । त्यसैले इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी जुन वृद्धि हुँदैछ, त्यसले पर्याप्त पँुजी ल्याउँछ । बीमा कम्पनीहरूको पुँजी स्ट्रेन्थ हुनु राम्रै हो । तर प्रायः गरी इन्स्योरेन्स हुन्छ । जस्तै– धेरै पुँजी भयो भने मैले रिडेन्सिल क्यापासिटी धेरै बढाउँछु । त्यो पैसा जुन धेरै बाहिर जान्थ्यो, त्योचाहिँ अलि कम हुन्छ । तर यसको मतलब यो होइन कि धेरै पुँजी बढाएर रि–इन्स्योरेन्स गर्दैन भन्ने होइन । त्यो कहिल्यै पनि हुँदैन । त्यसलाई अब कुन–कुन हिसाबले रि–इन्स्योरेन्सको अरेन्जमेन्ट गर्ने र धेरै क्यापिटल फ्लो बाहिर फ्लाई नहोस् भन्ने हिसाबले र २५ करोडको क्यापिटल हुँदा पनि प्रायः इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले क्लेम तिरेकै छ भनेपछि १२–१३ अरब त झण्डै मार्केटमा हामीले क्लेम तिर्यौं। भनेपछि यो एउटा फम मेकानिजम कुरा हो र विश्वमै इन्स्योरेन्स कम्पनी धेरै कम बैङ्कक्रप्ट हुन्छ । किनकि त्यो रि–इन्स्योरेन्स रि–इन्स्योरेन्सबाट बिजनेस हुन्छ र क्लेम परेको दायरामा मात्र ३ प्रतिशत हामीले उहाँहरूलाई पठाउँछौँ, जुन आफ्नो प्रिमियम क्लेम पर्दा पनि त्यही प्रतिशतले फेरि आउने भन्नाले यो चान्सेस धेरै कम हुन्छ, बैङ्क क्रप्टको । यो एउटा एकदम राम्रो पक्ष हो, इन्स्योरेन्सको ।
अहिले नयाँ कम्पनी आउने कुरा ९–१ बर्षबाट पाइपलाइनमा थिए । त्यसलाई दिन्नँ भन्न पनि मिल्दैन । नेपालको कन्टेस्टमा त्यस्तै ८ प्रतिशत एराउण्डपहिले ५–६ प्रतिशत थियो, अहिले ८ प्रतिशतको दायरामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ९२ प्रतिशतमा पुग्नका लागि थप बीमा कम्पनी आवश्यक थियो । तर नयाँ कम्पनी आइसकेपछि अलिकति नयाँ ठाउँमा जान सक्नुपर्छ । अब भइरहेको मार्केटमा आफैँ सानो केकलाई त्यो केक नफोडीकन त्यसैमा लुछाचुँडी गर्नु त त्यो आउने कम्पनीलाई पनि गाह्रो, पुरानोलाई पनि गाह्रो हुन्छ । नयाँ प्रडक्ट र नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्यो भने केही समस्या देखिँदैन ।
बीमाको पहुँच ८ प्रतिशतमा मात्र छ, अब बीमा साक्षरताका लागि के गर्नुपर्ला ?
बीमा साक्षरताका लागि हामीले आफ्नो बिजनेसको दौरानमा जुन पब्लिक सेक्टरबाट, जुन आफ्नै तरिकाबाट प्रमोसन एक्टिभिटिज या अवेरनेसको कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यो छँदैछ । यसलाई नियमन तथा सरकारी निकायबाट सशक्त बनाउनुपर्छ । जस्तो– भूकम्पमा जसले इन्स्योरेन्स गरे, अनिवार्य उनीहरूले दाबी पाए, हामीले गर्यौं। इन्स्योरेन्स गरेर बाढीको रिस्क पनि लिनुपर्छ भनेको भए अहिले केही न केही रिकभरी हुन्थ्यो होला । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्यो । जनताको जति सम्पत्ति छ, त्यसलाई इन्स्योरेन्स गर्र्ने बरु त्यसको लागि करमा अलिकति छुट दिने हो भने बीमा बजार केही विस्तार हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने गभरमेण्टको आफ्नै प्रपर्टीको इन्स्योरेन्स छैन, जनतासम्म कसरी पुग्ने ? किन इन्स्योरेन्सको रिक्वायर्ड छ, इन्स्योरेन्स भनेको के हो, यो गर्नु अति आवश्यक छ या छैन भनेर पहिले सरकारले, त्यसपछि जनताले बुझ्नुपर्छ । जनतामा पुग्न अलिकति समय लाग्छ तर यसलाई पुर्याउन अति जरुरी छ ।
अधिकांश बीमा कम्पनीहरू घर र गाडीमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्, अरू क्षेत्रमा किन जान नचाहेको ?
गाडी, घर वा कुनै फ्याक्ट्री इण्डस्ट्रीको केसमा त्यहाँ बैङ्कले पनि लगानी गरेको हुन्छ । बिजनेस गर्दा–गर्दा नाफा–घाटा उहाँले तिर्नु त ठीक छ तर कुनै त्यस्तो इन्सिडेण्ट भयो, त्यसले गर्दा बैङ्कको लोन जोखिममा हुन्छ भने उहाँले इन्स्योरेन्स गर्न लगाउनुहुन्छ र त्यो गरिराखेको छ । हामी सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७५ वटा जिल्लामा बाँडेर शाखा अफिसहरू खोलेका छौँ । गभरमेन्टबाट आउने सब्सिटाइज निकासा भएर आउन पनि समय लाग्छ । जुन ७५ प्रतिशत दिईराख्नुभएको छ, त्यो लिन पनि समय लाग्छ । हामीले २५ प्रतिशतमा पनि क्लेम तिरिराखेका छौँ । हामीलाई पनि एउटा के सोच छ भने इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको जस्तै कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सीबिलिटिज जुन हामीले भन्छौँ नि, इन्स्योरेन्सजति यो मामिलामा अगाडी को छ ? कसैलाई दुःख परेको बेला त्यै प्रिमियम बाँड्नु भनेर त्यो क्षतिपूर्ति दिनु भनेको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सीबिलिटिज हो । त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीको एउटा राम्रो पार्ट हो– ‘दुःखको बेला साथी ।’ भनेपछि सबै बिजनेसमा नाफा गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
गाउँ–गाउँमा गाई–भैंसी, अन्नबाली सबैको इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ । इन्स्योरेन्स गर्नुभयो भने यहाँको लागतको ७५ प्रतिशत सरकारले सब्सिडिज दिएको छ । कथंकदाचित कुनै घटना भयो भने सरकारले दिन्छ भन्नेखालको त्यो फ्लो नै गएको छैन । हाम्रो जहाँसम्म पहुँच छ या क्लाइन्टस आफैँ आएको छ, त्यो हामीले नाइँ भनेका छैनौँ ।
अर्को, गाडी र घरको कुरा गर्दा विश्वमै गाडीको इन्स्योरेन्स धेरै नै हुन्छ, प्रिमियम नेपालमा मात्रै होइन । यसकोे मुभमेण्ट बेसी हुन्छ । जहाँ विकास हुन्छ, त्यो विकासको सुरुवात नै बाटोघाटो र सवारी साधनबाट हो । त्यसबाहेक आफ्नो पर्सनालिटिको कुरा पनि आउँछ । त्यसले गर्दा यसको प्रिमियम जहाँ पनि धेरै जेनेरेट हुन्छ । प्रिमियम जेनेरेट भएको छ भने पनि हामीले त्यसमा नाफा छ भने बीमा समितिले को–अर्डिनेसन गरेर हामीसँग त्यसको डाटा लिएर त्यसको प्रिमियम घटाइरहेको छ । जस्तो– पहिले प्राइभेट कारको मूल्य जति मार्केट प्राइस थियो, त्यसको २ प्रतिशत जति थियो । हामीले घटाएर १.७० प्रतिशत जति र अहिले आएर १.२५ प्रतिशत जति भएको छ । जहाँ अलिकति बिजनेसको भोल्युम राम्रो छ, क्लाइन्टस्लाई मर्का नपरोस्, कम्पनीलाई फाइदा छ भने त्यो रेट पनि विस्तारै घट्दै जान्छ ।
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो । हामी पुरानो तरिकाले खेतिपाती गरिरहेको छौँ, त्यसलाई अब विस्तारै नयाँ सोच र आधुनिकीकरणमा ढालिएको छ । त्यो गर्दा स्कोप पनि बढ्छ र इन्स्योरेन्सको लागि एउटा नयाँ क्षेत्र पनि बन्छ । सुरुमा घाटा खाए ठीकै हो तर अलिकति बिजनेसको भोल्युम आएपछि पछिको लागि इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ ।
अन्त्यमा, सगरमाथा इन्स्योरेन्सले केही नयाँ योजना ल्याउँदै छ कि ?
गएको वर्ष हामीले ‘भीआईपी अन द स्पोट’ भनेर गाडीको लागि योजना ल्याएका थियौँ । गाडी दुर्घटनाको क्लेम सेटलमेन्ट कसरी छिटो गर्ने, त्यो योजना लञ्च गरेका थियौँ । त्यसमा करिब ५० क्लेम काठमाडौँ भ्यालीभित्र हामीले सेटलमेन्ट गर्यौं। यसले गर्दा ग्राहकबाट हामीले राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौँ । अहिले हाम्रो त्यो २४सै घण्टा हुन्छ । टोल फ्रि नम्बर छ । टोल फ्रि नम्बरमा फोन गरेपछि हाम्रा टेक्निकल साथीहरू जानुहुन्छ र ग्यारेजमा गएपछि कसको कति लाग्छ, नियमअनुसार के–कति पाउँछ र भ्याट बिल आउनेबित्तिकै तुरुन्तै पाउनुहुन्छ । त्यो प्रडक्टलाई अहिले हामीले बाहिरी ब्राञ्चहरूबाट पनि विस्तारै सुरु गरिरहेका छौँ । त्यसलाई विस्तारै नेपालभरि नै गर्ने सोचमा हामी छौँ । त्यसको साथसाथै यस पटकको प्रडक्टमा हामीले एउटा बैङ्कका लागि उहाँले जुन लोन दिनुहुन्छ, लोन दिएको एगेन्समा एउटा इन्स्योरेन्स गर्ने सेक्योर माइण्ड भनेर छ । त्यो ल्याउने विचारमा छौँ । त्यसले के गर्छ भने कथंकदाचित उहाँ बिरामी हुनुभयो या दुर्घटना भयो र उहाँले बाँकी लोन तिर्न सक्नुभएन भने त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिरिदिन्छ । ग्राहकले जागिर गरिराख्नुभएको छ र बीचैमा त्यो जागिर छुट्यो भने तीन महिनासम्मको किस्ता पनि तिर्छ र कुनै क्रिटिकल इलनेसको प्रब्लम छ भने त्यो लोन पनि इन्स्योरेन्सले तिरिदिन्छ । अर्कोचाहिँ हेल्थ इन्स्योरेन्स पनि लिएर आउँछौं र यो अहिले भइरहेको थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सलाई अझ व्यवस्थित बनाउनपट्टि पनि हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ ।
हामी जनतालाई क्रमशः निःशुल्क विजुली दिने अवस्थामा पुग्छौँ
पर्वतमा अजोड इन्स्योरेन्सको घुम्ती बीमा सेवा कार्यक्रम सम्पन्न
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सद्धारा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न
अजोड इन्स्योरेन्स अब एनपीआईमा आबद्ध
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स पनि अब एनपिआइमा आबद्ध
जनरल इन्स्योरेन्स पनि अब एनपिआइमा आबद्ध